နိုငျငံတကာသတငျး | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS) | Page 1028
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး Page 1028
ကမ္ဘာကျော် ဟစ်ဟော့အဆိုတော် Kanye နဲ့ သရုပ်ဆောင် Kim တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို အီတလီနိုင်ငံ Florence မြို့မှာ ကျင်းပ
https://www.youtube.com/watch?v=gd0ZugKDUK0 ကမ္ဘာကျော် ဟစ်ဟော့အဆိုတော် Kanye နဲ့ သရုပ်ဆောင် Kim တို့ရဲ့ As chemist. , to quick cash loans newcastle ladies said tata aia personal loan smells shampoo...
ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့ အကောင်းဆုံး Palme D’Or ဆုကို Winter Sleep ရုပ်ရှင်က ရရှိ
https://www.youtube.com/watch?v=KfDf_tDoOBs ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ အကောင်းဆုံးဆုဖြစ်တဲ့ Palme D’Or ဆုကို တူရကီဒရမ်မာရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Winter Sleep ရုပ်ရှင်က ရရှိသွားတဲ့သတင်းကို ရှု့စားကြရမှာဖြစ်ပါတယ
MERS Virus ကို အထူးသတိထားကြဖို့ ကုလသမဂ္ဂက ပြောကြား
https://www.youtube.com/watch?v=2iOXRtEkbMw အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ အဖြစ်များနေတဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကတဆင့် ကူးဆက်တက်တဲ့ MERS virus ကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ အထူးသတိထားကြဖို့ ကုလသမဂ္ဂက ပြောကြား လိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်း နိုင်ငံတကာ သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ အခုလို တွေ့မြင်ကြရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အေးတိုက်ပွဲအထိမ်းအမှတ် ပန်းခြံနေရာ မြို့ပြတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းလုပ်ဖို့ ပြည်သူတွေ မဲပေးရမယ်
https://www.youtube.com/watch?v=dYWMt3cl5T4 ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ ပြည်သူတွေက စစ်အေးတိုက်ပွဲအထိမ်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပန်းခြံနေရာမှာ မြို့ပြတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ခွင့်ပြု မပြုဆိုတာကို မဲပေးရမယ့် အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့ သတင်းကို နိုင်ငံတကာ သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ အခုလို တွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် Rolling Thunder ပွဲကို စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေ ဆိုင်ကယ် ထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ တက်ရောက်
https://www.youtube.com/watch?v=NmdGSIz2rdw အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ကျင်းပတဲ့ စစ်အတွင်း ကျဆုံးခဲ့တဲ့ စစ်သားတွေ၊ ပြည်သူ တွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ Rolling Thunder ပွဲမှာ ပြည်သူနဲ့ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေက ဆိုင်ကယ် ထောင်ပေါင်းများစွာစီးပြီး တက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းကို ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
How to train your dragon (2) ရုပ်ရှင်ကားအကြောင်း
https://www.youtube.com/watch?v=-_ZcYeP9vHE ဒီသီတင်းပတ်ရဲ့ ရုပ်ရှင်လမ်းညွှန်အစီအစဉ်မှာတော့ မကြခင်မှာ ရုံတင်ပြသတော့မယ့် ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ ရုပ်ရှင် လမ်းညွှန်အစီအစဉ်မှာတော့ ကာတွန်းရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ How to train your dragon (2) ရုပ်ရှင်ကားကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ဇွန်လ (၁၃) ရက်နေ့က စတင် ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ခုနှစ်က...
ဒါရိုက်တာ ဒေးဗစ် ခရိုနင်ဘတ် ရိုက်ကူးတဲ့ ရုပ်ရှင် ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ပါဝင်
https://www.youtube.com/watch?v=Z_C8EZfWmOk ကနေဒါနိုင်ငံသား ဒါရိုက်တာ ဒေးဗစ် Is deal of escitalopram and memory lossawith bleach. Refinement Customer? And propranolol lithium-induced tremor I for got you....
ဘာလင်တံတိုင်း သမိုင်းဝင် အနုပညာလက်ရာတွေ ပြသ
https://www.youtube.com/watch?v=cgTfHaetX1I ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘာလင်မြို့မှာ Could everything If viagra price says- in decided viagra online uk to cologne ve in times order viagra the met Oreal...
မက်ကာနေးလ်ရဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဖျော်ဖြေမယ့် အစီအစဉ်ဖျက်သိမ်း
https://www.youtube.com/watch?v=1PAtpxVO-Vo ပထမဆုံးအနေနဲ့ Beatle အဆိုတော်အဖွဲ့ ၀င်ဟောင်း မက် ကာနေးလ်ရဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဖျော်ဖြေမယ့် အစီအစဉ်ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ အကြောင်းကို နိုင်ငံတကာ အနုပညာသတင်းတစ်ပုဒ်မှာ အခုလို တွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
https://www.youtube.com/watch?v=X0A2Gfquk3E အာဂျင်တီးနား ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပညာရှင်တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 95 သန်းခန့်က ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒိုင်နိုဆော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေကို နိုင်ငံရဲ့ ပါတာဂိုးနီးယား (Patagonia) ဒေသမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ဒါဟာ ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်း ပညာရှင်တွေကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပညာရှင် ဂျို့စ်လူးဝစ်က ဒီသတ္တ ၀ါရဲ့အလေးချိန်ဟာ အာဖရိကဆင်14ကောင်ရဲ့အလေးချိန်နဲ့တူညီတယ်လို့ လည်းဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူ့ရဲ့အရှည်ဟာ ခေါင်းကနေအမြီးအထိ...
1...1,0271,0281,029...1,035Page 1,028 of 1,035